Features - eeg jidka oo ka mid ah hirarka ROM waa muddo kacsan
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Features - eeg jidka oo ka mid ah hirarka ROM waa muddo kacsan
In qowladda pachinko ah, waxaad u malaynaysaa in madal xanaaqsan inta badan waa kan ugu fiican. Haddii kale, sababtoo ah waxa ay noqon lahayn ma qabanayo iibka qowladda pachinko. In, sida tallaabooyin caadi ah tii pachinko sida, aan soo bandhigno doontaa sida loo arko iyada oo miiska xanaaqsan of sifooyinka.
kaliya isla markiiba fahmay in haddii aad eegto.
miiska kacsan ee feature ugu fiican waa xaqiiqda ah in la qabatimo ka badan wax uu noqdo ayan dubka sare. Marka 1000 jeer oo laga cabsado waxa uu ku yaalaa Zara ayaa sidoo kale waxaa lagu sameeyey si la qabatimo ee 2,000 oo jeer taagan. ROM waqtiga xaaladda noocan oo kale ah gudahood, hadlaya, tusaale ahaan, waa dawlad, sida roulette ayaa dib u soo jirtay si joogta ah hab xanaaqsan.
sidoo kale ku soo laabto nolol caadi ah, oo aad inta badan noqon kartaa waqti dheer. muddo kacsan, waxa uu noqon doonaa in aan dawladda ku jira oo dhan, waxaan u malaynayaa in ay sahlan tahay in la fahmo. Waxaa sidoo kale la mid, waa in tirada dhacdooyinka ka mid ah wax soo saarka waxaa si wayn hoos.
in muddada caadi ah, laakiin wax soo saarka si joogto ah aan ka muuqan doontaa, in muddo xanaaqsan, wax soo saarka laftiisa ayaa noqonaya mid ay adag tahay in uu ka tago. Natiijadan ayaa waxa ay ka baxsan, sidoo kale waxaa ka soo baxay mudaaharaad gaari karin, waxaan dhawaan lahaa oo aan horumar kasta.
Intaa waxaa dheer, haddii aad ayaa ugu danbeyn ku xiran Ghanna ah, ama noqon dhamaadka ee mid ka mid ah hal, waxaa loogu tala galay in ay noqdaan ama dhamaadka ee daafaca la jiido ayaa marna iyo kala duwanaansho itimaalka xitaa hal mar ee saacadaha shaqada ka gaaban. Markaas, waa la liqay doono oo dhan oo ay muddo dheer la sugayay soo baxay sanduuqa, sidoo kale waxa uu noqday maalgelinta loo baahan yahay. From waxaa jira, waxa dhici doona wareeg xun ama la qabatimo bilaabmaa. Waxa ay noqon doontaa socodka muuqaalada muddada xanaaqsan.
in qowladda pachinko ah, maxaa yeelay, miiska xaalad xun sida inta badan waa kan ugu fiican, waxaan sidoo kale waxaan u malaynayaa in badan oo waayo-aragnimo ugu fiican ee aad ku dhuftay on haysa noocan oo kale ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa aanu macno ah in la ogaado ka dib markii aan ku dhuftay. socodka xumaa ayaa sugaya, ee sida qulqulka disorder waji ayaa la go'aamiyey si fiican u noqon in la ogaado ka hor inta ku dhufan. In
Tani waa waxtar u yeelata in robo xogta iyo counter xogta. data khal Eeg Shaxda ilayska iyo bayaan u kacsan-nolosha la go'aamin karaa. Data ee horyaalka ku jirta sida muddada u dhacooda ah, garaafka, waxaan u malaynayaa in ilaa hadda hoos line xarunta. Tan iyo
nolosha kacsan ayaa noqday itimaalka Ghanna ka xun of miis dheer, isku day in aad wada hubi. Intaa waxaa dheer, madal in lala iman lahaa qaababka sida xanaaqsan-nolosha, waxaa jira waqtiyo aad si ula kac ah soo kabsaday mashiinka in qowladda pachinko ah.
ama kaliya ee uu leeyahay Adan socodka, waxaan u maleynayaa in si fiican si loo ogaado waxaa loo baahan yahay in sida waayo, waxay sameeyeen mashiinka soo kabashada. Si kastaba ha ahaatee, aan wax badan soo raacay by turjumidda waa muddo xanaaqsan.
in ay la yimaadaan sida wajiga disorder ah qaababka, kiiskan oo uu soo raacay by dhowr maalmood, sidoo kale waxaa loo arkaa in ay sii wadaan in ay baddalo si ay nolosha caadiga ah iyo xilliga wanaagsan. Marka aad noqoto kaca isbedel yar by garaaf yar, waxaan u malaynayaa in ay tahay gacmaha u maqlaan sida ay isku dayaan in yar oo hit ah in ay isku dayaan. Haddii ay jirto
a arko iyada oo si adag on boundary xilliga xoog leh ka technology xanaaqsan-nolosha, yaa kale oo suuragal ah in hal qof oo kaliya calal ku guuleysto jasiiradda of qaddar in ay waajahaan balaadhan oo furan ma aragto. Platform, kaas oo si cad u galay in muddada xoog leh, sababtoo ah waxaan sidoo kale isha soo horjeeda, ma noqon karaan si fudud u heli. In la yidhaahdo in
, bilaabayso waa mid aad u adag tahay in la arko iyada oo soohdintu waxay xilliga adag oo muddo si lama filaan ah uga caroodeen, waa halis quruxsan sare. Iyadoo taas maskaxda, miiska aan u malaynayo in muddada xoog leh ayaa sidoo kale qaab horusocod ah ee hadda, waxaa ka wanaagsan si aad u hesho markii fursad ay jirto in saldhig macaamiisha waydaarsaday dheelitirka waa mid deggan. Waxaan qabaa in ay jirto baahi ah si aad u ogaato si aad u wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, aan wax badan soo raacay by turjumidda waa muddo xanaaqsan.
, bilaabayso waa mid aad u adag tahay in la arko iyada oo soohdintu waxay xilliga adag oo muddo si lama filaan ah uga caroodeen, waa halis quruxsan sare. Iyadoo taas maskaxda, miiska aan u malaynayo in muddada xoog leh ayaa sidoo kale qaab horusocod ah ee hadda, waxaa ka wanaagsan si aad u hesho markii fursad ay jirto in saldhig macaamiisha waydaarsaday dheelitirka waa mid deggan.